ko htike's prosaic collection: မုန်တိုင်းနဲ့မ
စဉ်းစားကြည့်..ဒီအဖွားကြီး ဒီလိုဖြစ်တာ ခင်ဗျားမှာလည်း တာဝန်ရှိတယ်၊ ကျုပ်မှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်....ဒီအစိုးရကိုဒီနေရာမှာ နေခွင့်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့ပြည်သူအားလုံး ဘယ်သူမှတာဝန်မကင်းဘူး။ ငါ့ကိုတော့မထိသေးဘူး...။ ငါတော့ချောင်နေသေးတယ်.... နေသာသလိုနေလိုက်ဦးမယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ရေသာခိုနေဦးမှာလား။ အားလုံးတမိုးအောက်မှာ အတူတူနေသမျှ ကံကြမ္မာက အတူတူပဲဆိုတာ တွေးမိကြရဲ့လား။ ဒီအတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေရင် အဲဒီကံကြမ္မာဟာ တစ်နေ့ခင်ဗျားတို့ ကျုပ်တို့ဆီကိုရောက်လာမှာ မလွဲဘူး။ ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ သားသမီးတွေဆီကို ရောက်ဦးမှာမလွဲဘူး။ ဒီအစိုးရရှိနေသမျှဒီကံကြမ္မာကမလွတ်ဘူးဆိုတာ သိကြပါ။
Yeah man you are right,
When I told to my friends to do something for the sake of Burmese people. I got the same answer from them.They told me that"we are the outsiders and there is nothing we can do".So I wanna ask, is there anything we can do as the outsiders?
The junta knew the cyclone was coming . That's why they moved their military aircrafts to safer places prior to the cyclone.
I think they were planning how to get financial and political advantages out of the cyclone.